Us About - Axnew Muuji Technology Co., Ltd.
Display Axnew Technology Co., Ltd ayaa sameeyay ay suuqa soo bandhigay warshadaha gaar ah sida hoggaamiye ee technology bandhigay.
Production Golaha Line
Tan iyo 2009, Display Axnew Technology Co., Ltd ayaa sameeyay ay suuqa soo bandhigay warshadaha gaar ah sida hoggaamiye ee technology bandhigay. Iyadoo sano waayo-aragnimo xirfadeed, waaxda iibka bixisaa taageero farsamo iyo talo xirfadeed macaamiisha our, R & D-wadareed ayaa had iyo jeer ku dadaalaya in la qorsheeyo oo la siinayo macaamiisha our xal wanaagsan, noo leedahay horumariyo A guddiga / D iyo kormeerayaasha dhaafay imtixaanka warshadaha iyo helay CE , FCC, Certificates Rohs.
group-soo-saarka leh qaybaha electronic hodan iyo khayraadka qeybiyeyaasha, dhowr ka mid ah faa'iidooyinka badan oo ku siin doonaa waa qalab ah oo noo oggolaan doona in ay ku ool ah, wax soo saar leh, wax ku ool ah, iyo ugu muhiimsan, wuxuu xoojin doonaa iskaashiga u dhexeeya Axnew iyo macaamiisha our, taas oo ka dhigi doonaa na qeybiyeyaasha caalamka.
waxaan Currently ku adkeeyey xiriirka muddo dheer la macaamiisha in this line warshadaha bandhigay adduunka oo dhan.
bandhigay AXNEW developes our ganacsiga via bandhigyo, Alibaba, il Global madal B2B si degdeg ah years.We kuwan waxaa ku kalsoon by macaamiisha in ay ka kooban tahay saarayaasha qalabka dhalshada, warshadaha qalabka gacanta, qalabaynta codsiyada dadka isticmaala in ka badan 50 dal.
Waxaan ku adkaysanayaan in la isticmaalayo darfahoodii cusub iyo asalka ah, gaar ahaan fasalka warshadaha, waayo, kormeerayaasha iyo displays.Our habka qeybiyeyaasha deggan yihiin inta badan darfaha Auo, fiiqan, Chimei, Boe, Samsung, LG.
waxyaabaha kartoo yihiin ganacsi taraysaa. Macaamiisha noo wadaagaan wax macluumaad ah oo ku saabsan fikradaha oo aynu wax ka beddelo qalabka caadiga ah.
ruux Axnew alaabta caan ah oo wanaagsan, mabaadi'da adeeg lagu kalsoonaan karo waxay nagu caawinaysaa si fiican u sameyn.
● xal monitor Industrial Fasalka
● xal LCD jir Open
● xiriiri Industrial xal monitor
● qaab Bright High
● Touch xal kumbiyuutarada Panel
In 2009, waxyaabaha Axnew'main yihiin ganacsiga ganacsiga darfaha LCD 'iyo tirada caadiga ah ee kormeerayaasha jir furan.
In 2012, Axnew ayaa 3-4 injineerada farsamo si ay u horumariyaan kormeerayaasha our fasalka warshadaha. Waxaan horumariyo guddiga xakamaysada ah noo gaar ah warshadaha leh heerkulka ballaaran (-25 digrii 80 degrees), si ay u taageeraan bandhigay our ee deegaanka shaqada adag.
In 2014, waxyaabaha our caan yihiin kormeerayaal pro-capacitive taabto, touchs warshadaha leh IP65 bezel hore ee guddiga Buur, qaab brightess sare ee codsiyada dibadda, taas oo kor u qaado ku dhawaad ​​45% -50% mugga dhoofinta.
Axnew si guul la aasaasay xiriirka muddo dheer la macaamiisha in this line warshadaha bandhigay adduunka oo dhan. Dhamaan qaab la CE, FCC, waafaqsanaanta rohs.
In 2016, Axnew kordhiyay our ganacsiga iyo gurantees adeegga damaanad our, qaar ka mid ah wada-hawlgalayaasha ka Germany, Canada samayn karin dayactirka asaasiga ah, noo soo saarka ugu weyn iyo adeegga damaanad waa in Shiinaha.
Ka sokow, soo bandhigaa Electronic Hijmans, Taiwan Computex, soo bandhigaa Shanghai Touchscreen iwm naga caawin lahaa si ay u muujiyaan wax soo saarka our si cad. madal B2B, tusaale ahaan Alibaba ha lahaa macaamiisha si fudud u samayn Xirfado.
Iyadoo sano waayo-aragnimo xirfadeed, waxa aan isku halleeyey by macaamiisha in ay ka kooban tahay saarayaasha qalabka dhalshada, warshadaha qalabka gacanta, qalabaynta codsiyada dadka isticmaala in ka badan 40 dal.
Hadda waxaan isku diyaarineysa distrubutor ugu horeysay ee Europe. Axnew daacad u arkaa, in aad iskaashi!
Kooxdayada Axnew ka kooban Kooxda Overseas iibka, Kooxda iibka Qoyska, R & D Center, Waaxda Maaliyadda, Wasaaradda Human Resource, Production Factory.
Waxaan nahay koox dhalinyaro ah, iyadoo sano waayo-aragnimo xirfadeed, waaxda iibka iyo kooxda farsamo siiyaan taageero farsamo iyo talo xirfadeed macaamiisha our.
Our warshad ka kooban aqoon-isweydaarsiga Nadiifi qolka, 2 khadadka-soo-saarka, 1 qolka gubashadeeda, 2 bakhaarada.
Macaamiisha kuwaasoo wada shaqeyn la leh Axnew helaan taageerada dheer noo dheer ka sokow ganacsi.
Ku soo dhawow oo nala soo xiriir si xor ah!
1.Once aad xiisaynayso in waxyaabaha our shirkadda ee, fadlan ha ka waaban inaad baaritaan noo .Aabbayaashayo waaxda iibka bixisaa taageero farsamo iyo talo xirfadeed inaad 48 saacadood gudahood, R & D-wadareed ayaa had iyo jeer ku dadaalaya si loo hindiso iyo aad bixinta xal wanaagsan.
Si 2.Every xitaa tiro yar ama bulk noqon lahaa ku xiran jadwalka processing iyo nidaamka wax soo saarka, kuwaas oo si adag sida la Qorshaynta Sahayda Enterprise (ERP) waafaqsan.
Kaaliyaha adeegga 3.Professional ula socdaan in aad la yeelato xaaladaha badeecadaha iyo xaaladda sale ka dib. Waxaan rajaynayaa in mabaadi'da our adeeg lagu kalsoonaan waayay inuu na sii adkeeyo xiriirka wada shaqeynteena labada dhinac.
4.For amarada our, waxaan inta badan lagu rido marka la eego damaanad ka dib markii ay yimaadeen meesha aad u socoto. Markaas waxay ku noqon lahaa adeegyada DOA iyo RMA gudahood damaanad ah. Caadi ahaan damaanadda 1 sano amarka caadiga ah, waxaan gaarsiin karaan ilaa 2 sano damaanad haddii aan la macaamiisheena ku heshiiyeen. 3 sano damaanad lagu wada hadleen karo qaar ka mid ah mashaariicda gaarka ah.